Win Exciting Prizes & Gift Hampers - Talent Hunt Syangja - Sajha Entertainment
Home/अन्य no use/Win Exciting Prizes & Gift Hampers – Talent Hunt Syangja
Win Exciting Prizes & Gift Hampers – Talent Hunt Syangja
Sajha Entertainment Send an email १८ श्रावण २०७४, बुधबार १०:३९
के तपाईं सँग प्रतिभा छ ? अनी आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्ने मन्चको खोजीमा हुनुहुन्छ ? पक्कै पनि आफु सँग भएको प्रतिभा मानिसहरुले हेरुन र उचित मुल्याङ्कन होस् भन्ने चाहनुहुन्छ होला ! यदी तपाईं सँग गीत गाउने, अभिनय, नृत्य जस्ता प्रतिभा छ भने हामी तपाईंहरुलाई त्यस कलालाई प्रस्तुत गर्ने मन्च दिने छौँ ।
हाम्रो टिम स्याङ्जामा प्रतिभाको खोजि कार्यक्रमको लागि तपाईं माझ आउँदै छ । तपाईंइँहरुले प्रस्तुत गर्नु भएका सबै प्रस्तुतिहरु Sajha Entertaiment YouTube Channel बाट प्रस्तारीत हुने छन् र प्रतियोगीहरु मध्य विजेता छनोट गरेर उचित पुरस्कार प्रदान गरिनेछ ।
मिती : २०७४,साउन २९ / 13th August 2017
फारम भर्ने स्थान : स्याङ्जा, पुतलिबजार – KSR इन्टरनेश्नल स्याङ्जा
फारम : Rs. 100
थप जानकारीको लागी : 9815139554,9867359304,9805899070
ईमेल : info@sajhaentertainment.com / sajhaentertainment@gmail.com
कृपया अनलाईन फारम भरेर त्यस फारमको कपी हामीलाई mail गर्नुहोला ।
बिजेतालाई प्रुस्कार बापत रु ५००० प्रधान गरिने छ ।
YouTube views को आधारमा बिजेता छनोट गरिने छ ।
Sajha Entertainment is organizing Talent Hunt at Syangja on 13th August 2017
Win Exciting Prizes & Gift Hampers
Organized by Sajha Entertainment
Entry Form :Rs.100
Entry Form Available : Syangja, Putalibazzar – KSR International Syangja
Mobile Number : 9815139554
For more info Email us at info@sajhaentertainment.com / sajhaentertainment@gmail.com
When form is filled online , then please send us the copy on the Email
info@sajhaentertainment.com / sajhaentertainment@gmail.com